Ekena fa misy ny fitenenana hoe izay mangalatra atody hangalatra omby saingy heverina kosa fa ny ankizy dia mbola natao hobeazina fa tsy mbola natao hiharana sazy henjana toy ireo olon-dehibe nanao heloka. Ny fitsaram-bahoaka rahateo voararan’ny lalàna. Misy ny toerana natao hanarenana ny zaza nania na koa antsointsika mahazatra hoe zaza maditra. Misy antony ireny matoa natsangana sy havahan’ireo firenena manerana izao tontolo izao amin’ny antsoina hoe fonja. Ity farany no toeram-panarenana ny olon-dehibe, hoy ny fanazavan’ny filoham-pirenena izay raha nitsidika ny fonjan’Antanimora tamin’ny taon-dasa, satria tsy mitovy ny fanabeazana fanao amin’ny lehibe sy ny ankizy. Mampametra-panontaniana hoe hanitsy ity zaza ity araka ny tokony ho izy ve izao nanaovana azy tetsy Mahamasina izao ?